Ikhaya - Foster Swiss
Inkampani yethu yenziwe ziingcali ezivela kwiibhanki zabucala zamazwe jikelele ezihlonela umthetho wokugcina iimfihlo kwebhanki yaseSwitzerland. Ungazibeka ezandleni zeengcali eziya kuqinisekisa ubufihlo bakho.
ISICWANGCISO SEBANDLA SAKHO
Ukusuka kwi-Foster Swiss, abacebisi ngerhafu kunye nabezemali abaneminyaka engaphezu kwe-15 yamava, sikunceda uyilo lwecebo elenzelwe ukuhlonitshwa kwemithetho yamazwe jikelele kutshintshiselwano lolwazi oluzenzekelayo
Fumanisa iindawo zethu eziphambili zokubonisana
Ukudalwa kweenkampani ezingaselwandle
AIngcebiso eqondene nomntu kwimicimbi yomthetho wamashishini aphesheya.
Abacebisi bebhanki bamazwe aphesheya
Tukusebenza ngeyona bhanki i-solvent kwaye ikhuselekile kwiindawo eziphambili zerhafu.
Iindawo ekuhlalwa kuzo iirhafu kunye nemimandla yerhafu ephantsi
CAbacebisi abaziingcali kwimimandla yerhafu ephantsi.
Utshintshiselwano ngolwazi CRS-FATCA
Aukucebisa iingcali zebhanki zamanye amazwe kwimicimbi yotshintsho lolwazi oluzenzekelayo
Iinkampani ezingaselunxwemeni kunye neeakhawunti
Uthungelwano lwethu lwabacebisi behlabathi lonke likuwe ukuze usete inkampani yakho elunxwemeni kunye neakhawunti yebhanki engaphesheya kulawulo olukufanele iimfuno zakho.
Jonga onke amagunya
Fumana amandla akho
Fumana inkampani esele isungulwe ngeakhawunti yebhanki ngaphandle kwamaphepha. Nxibelelana neenkampani zethu ezikhoyo.
GSicebisa ukuba kuvulwe iiakhawunti zebhanki engaphesheya kulo naluphi na ulawulo. Sisebenza nabanikezeli benkonzo zabucala abahamba phambili.
Amakhadi angaziwayo kunye neeakhawunti
TBonke abathengi bethu bayonwabele imfihlo abayidingayo ngokufumaneka kwemali yabo.
Amakhadi ahlawulelwa kwangaphambili
GUkulungiselela ukulungiselela iintlawulo zeshishini lakho lamanye amazwe ngenkqubo yekhadi elihlawulelwa kwangaphambili.
Imvelaphi yobutyebi belinye ilizwe
Ukutsalwa kobutyebi baselwandle
Ulawulo lwerhafu yokuhlala
Dlulisa indawo yakho yokuhlala kwiirhafu eziphantsi. Ukubheja ngale ndlela isemthethweni yokuhlawula irhafu encinci.
Ukukhuselwa kwelifa lemveli
Lumka kwaye ukhusele ii-asethi zakho ngokuchasene netyala elinokubakho elizayo. Ngokuchanekileyo khetha igunya
Siza kuhamba kunye nayo yonke inkqubo yothethathethwano ngaphambi kwe-AEAT kwaye siya kukubonelela ngokulinganayo kwimeko yakho yangoku.
Ukutshintshwa kolwazi oluzenzekelayo
Yiya inyathelo elinye phambili kwaye uhlale unolwazi malunga notshintsho lomgaqo olunokuchaphazela iiakhawunti zakho zamanye amazwe
Funda ukuba iqela lethu labacebisi libanceda njani abantu abalumkileyo njengawe
FI-Oster Swiss kukubonisana kwamazwe aseSwitzerland, okusekwe eMadrid, eBarazil naseGeneva, kunye neeofisi ezikumanqanaba aphezulu, ezibonelela ngeenkonzo zayo kwintengiso yehlabathi elithetha iSpanish. Umda wokusebenza kwethu usebenza kwimicimbi yezemali, yerhafu kunye neyomthetho, nokuba yeyabantu okanye iinkampani.
Iindaba zamva nje ezivela kwibhloko yethu
Fumana iindaba zamva nje kwicandelo lezemali.
•31 Julayi, i-2020•sergio
Iminyaka emininzi, iiakhawunti ezingaselunxwemeni eSwitzerland bezisetyenziswa ziinkampani kunye nabantu, zonke ngenjongo yokusebenzisa izibonelelo ezahlukeneyo ...
Ukuba ubukhangela ulwazi kwaye ufunda malunga nolwandle kude nexesha, mhlawumbi uyazi ukuba iSwitzerland yenye yezona ndawo zidumileyo kulawulo ...
Ukwamkelwa yiNkundla ePhakamileyo yezibheno ezithathu ezinxulumene nokubhengezwa kweempahla kunye namalungelo aphesheya kuya kuqinisekisa ubukho bokuthandabuza obufanelekileyo malunga ...
Esona sizathu siphambili sokuba uninzi lwabathengi bethu bafune ukuvula i-akhawunti yebhanki phesheya kukusebenzisa izibonelelo ezinokuthi zibanike zona, ...
Kuyafana neeakhawunti zebhanki kwi-EU
•30 Julayi, i-2020•sergio
Ngaba kunokwenzeka ukuvula iakhawunti engaselunxwemeni eSeychelles kude?
Njengoko iSeychelles ingelinye lamaziko aphambili kwezemali e-Afrika, oku kukhokelele ukuba iziqithi zibe lulawulo olukhulu lwaselunxwemeni, kunye neeakhawunti ze-Seychelles ...
Ukunyanzelwa kweSwitzerland kwimidiya
Ukunyanzeliswa kweSwitzerland kukhuthaza iqela lokuqala elihlengahlengisiweyo lesikebhe elithatha inxaxheba kwiCopa del Rey
▶ Jonga ingxelo epheleleyo
I-Coiberian yamazwe amaninzi iyalela ukubamba kwayo ukusuka kwi-Foster Swiss
Funda iindaba epheleleyo
Ukuvula i-akhawunti eSwitzerland: ukhetho olusemthethweni kodwa alulungele lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
Iziteshi zethu zentlalo
Selelumkisa abasebenzisi bale portal: kufuneka bazi ukuba ukusetyenziswa gwenxa okanye kobuqhetseba kolwazi kule webhusayithi kunokuthathwa njengolwaphulo-mthetho okanye isibonakaliso sokubaleka kwirhafu kwilizwe labo. Ngale ndlela, aba basebenzisi banendawo yabo yokuhlala esekwe eSpeyin kufuneka babe sele behleli kunye noxanduva lwabo lwerhafu ukwazisa iSebe lezeziMali laseSpain ngokwemigaqo eboniswe kwi-Order HAP / 72/2013, kaJanuwari 30, Imodeli engu-720, isibhengezo esifundisayo malunga nempahla kunye namalungelo abekwe phesheya, sivunyiwe.